र्फकेर हेर्दा यस्तो रहयो –२०७४ « aamsanchar.com , aamsanchar
र्फकेर हेर्दा यस्तो रहयो –२०७४
तपाईले कसरी बिताउनु भयो वर्षदिन आज मुल्याङ्कन गर्दै हुनुहुन्छ होला तर देशमा के–के भए त महत्वपूर्ण घटना विश्लेषण २०७४ को । समग्रमा २०७४ देशको राजनीतिक परिवेशका लागि भने सुखदमय बन्न पुग्यो । स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न हुनु राजनीतिक वृतमा २०७४ लाई सन्तोष जनक मान्न सकिन्छ । लामो समयको राजनीतिक अन्योलता चिर्दै देशको राजनीतिक स्थायित्वका लागि तल्कालिन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु बैशाख महिनाका लागि शुभ संकेत देखिएको थियो । बैशाख ३१ गतेको स्थानीय तहको निर्वाचन मुलुकका लागि ऐतिहासिक क्षण बन्यो ।
पहिलो चरणमा भएको मतदानले ३४ जिल्लाका २ सय ८३ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुन्यो। संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान कार्यान्वयनको एउटा महत्वपूर्ण खुडकिलोका रूपमा यो चुनाव सावित पनि भयो । पाँच वर्षको अन्तरालमा हुनुपर्ने स्थानीय निर्वाचन २०५४ सालको जेठ यता भएको थिएन । मुलुकको राजनीतिक व्यवस्था सही ‘ट्रयाक’ मा भएको भए यस अवधिमा तीन पटक स्थानीय निर्वाचन भएर अहिले चौथो पटकका लागि तयारी भइरहेको हुन्थ्यो । तर माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व, राजाको प्रत्यक्ष शासन, जनआन्दोलन, संविधान निर्माण जस्ता पछिल्लो डेढ दशकका महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमले स्थानीय निर्वाचन हुन सकेन ।
लामो समयको जनप्रतिनिधि विहिन अवस्थालाई तोड्दै मुलुक संघियतामा गए लगत्तै स्थानीय निकायले जनप्रतिनिधि पाउँदा स्थानीय जनता पनि उत्साहित बनेका थिए । विप्लप माओवादीको डर धम्कीका बावजुद पनि स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जनताको उत्साहजनक सहभागिता रहेको थियो । सत्तामा रहेको काँग्रेसले स्थानीय निकायमा आफ्नो वर्चस्व दावी गरिरहे पनि जनताले भने भारतले लगाएको नाकाबन्दीका विरुद्ध खरो रुपमा
प्रस्तुत भएको एमालेलाई बढी पत्याए ।
हिमाली र पहाडी जिल्लाको निर्वाचन सम्पन्न भए लगत्तै असार १४ गते झापा सहितका ३५ जिल्लामा स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको थियो । स्थानीय निकायको निर्वाचनमा बैद्य माओवादीले ठूलै अवरोधको प्रयास गरेको थियो । निर्वाचन हुनु एक दिन अघिमात्रै झापाका १० स्थानमा विप्लव माओवादीले बम राखेर आतंक मच्चाउने प्रयत्न पनि नगरेको होइन तथापी चर्को घामको बावजुद पनि स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिलाई मतदान गर्न उत्साहित भएर गरेको सहभागिता सम्झन लायक थियो ।
प्रदेश नम्बर १ को १४ जिल्ला, प्रदेश नम्बर ५ को १२ जिल्ला र प्रदेश नम्बर ७ को ९ जिल्लामा भएको निर्वाचनमा एक सय १६ वर्ष सम्मका नागरिकले मतदानमा सहभागिता जनाएका थिए । दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि नेपाली काँग्रेस दोस्रो दल बन्न पुग्यो भने एमाले पहिलो स्थानमा रहन सफल भयो । स्थानीय निकायको निर्वाचनमा सत्तासाझेदार काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको तालमेललाई पछि पार्दै एमाले पहिलो नम्बरमा रहन सफल भयो ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा चर्चाको शिखरमा प्रचण्डपुत्री रेणु दाहालको क्षेत्र बन्न सफल भयो । मतपत्र च्यातेको विवादले अदालत सम्मपुग्नुपर्ने अवस्था बन्यो । मत पत्र च्यात्नेमात्र होइन चिठ्ठा तानेर विजेता घोषणा गर्ने काम पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा नभएको होइन । स्थानीय तह अन्र्तगत झापाको कमल गाउँपालिकाको निर्वाचनमा अध्यक्ष पदका एमाले र काँग्रेसका उम्मेद्धारहरुले बरावर मत ल्याए पछि चिठ्ठा मार्फत विजेता घोषणा गरिएको थियो ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा संविधान संशोधनको मुख्य राखिरहेको मधेसवादी दलहरुले भने चुनाव वहिस्कार गरिरहे । निक्कै लामो रस्साकस्सी पछि प्रदेश नम्बर २ का ८ जिल्लामा असोज २ गते स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरिए पछि संविधान संशोधनको मुद्धालाई चुनाव मार्फत अगाडी बढाउने भन्दै मधेसकेन्द्रीत दलहरु पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी बनेका थिए । मधेसमा आफ्नो पकड दरो दावी गर्ने मधेसवादी दलहरुको अवस्था उनीहरुले सोचे अनुरुपको नभएको देखायो ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ता साझेदार काँग्रेस र माओवादी गलाजोडेर हिँडे पनि राजनीतिक परिवेशले चाडपर्वकै वेलामा कोल्टे फे¥यो । सत्तामा साथ दिइरहेका प्रचण्डले प्रधानमन्त्री देउवालाई सुईंको सम्म नदिई एमाले अध्यक्ष केपी ओली सँग चामत्कारिक रुपमा बाम एकताको कुरा भईरहेको कुरा बाहिर आयो । नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बावुराम भट्टराई, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीले बाम एकता गर्दै एउटै कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने उद्घोष पनि नगरेका होइनन् ।
सत्ता साझेदार दलनै विपक्षीसँग साँडगाँठ गर्न पुगेपछि देउवा नेतृत्वको काँग्रेस सरकार लरबराउन पुग्यो । स्थानीय निकायको निर्वाचनमा भएको साँठगाँठलाई तोड्दै प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा भने एमालेसँग साँठगाँठ गर्न पुग्यो । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको चुनावमा नराम्रोसँग पराजय वेहोरेको काँग्रेसका ठूला हस्तीहरु नै निर्वाचनमा पराजित बन्न पुगे । रामचन्द्र पौड्याल, कृष्ण सिटौला, विश्वप्रकास शर्मा लगायतका काँग्रेसका प्रखर नेताहरु समेत निर्वाचनमा पराजित हुनुले काँग्रेस भित्र निकै खैलावैला मच्यो ।
उता बाम गठबन्धन गरेर चुनावमा होमिएको एमाले र माओवादी केन्द्रका पनि ठूला मानिएका नेताहरु पनि पराजित बन्न पुगे । एमालेका वामदेव गौतम, माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतका केही नेताहरु पनि पराजित हुन पुगे । सिटमा कुरा नमिले पछि बाम गठबन्धन छोडेर सुटुक्क काँग्रेसँग सहकार्य गर्न पुगेका नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बावुराम भट्टराईलाई भने फाइदै पुग्यो । तर उनले सोचेझैं उनको पार्टी भने राष्ट्रिय दलहुनबाट बन्चित भयो । संचार क्षेत्रका विज्ञ र प्रखर रुपमा हेरिएका विविसी नेपाली सेवाका पूर्व सम्पादन रवीन्द्र मिश्रलाई पनि जनताले निर्वाचनमा लोप्पा खुवाइदिए । उनी काँग्रेसका प्रकाशमान सिंहसँग झिनो मतअन्तरले पराजित बन्न पुगे । आफूलाई राजावादी दल ठान्ने राप्रपा, राप्रपा प्रजातान्त्रिक लगायतका राष्टिूय तथा क्षेत्रीय पार्टीहरुको चुनावमा जनताले शेखी झारिदिए ।
मधेसलाई आफ्नो ठेक्का सम्झिएका मधेशवादी दलहरुलाई पनि निर्वाचनमा जनताले राम्रैसँग सवक सिकाएका छन् । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय निर्वाचनमा जातियता, धार्मिक लगायतका एजेण्डा बोकेका दलहरुलाई जनताले धुलो चटाइदिए । स्थानीय प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनबाट पहिलो दल बनेको एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले अधिकाशं स्थानमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाइसकेको छ । नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री मण्डल गठन गरिएको छ । यो २०७४ का लागि राजनीतिक वृतको ठूलो सफलता मान्न सकिन्छ । ०७४ सालमा नै विद्या भण्डारी र नन्दबहादुर पुन राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित बन्न पुगे ।
०७४ सालमा नै एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित हुँदा उनलाई संसदको दुईतिहाइ मत प्राप्त भयो । यो राजनीतिक इतिहासको कुनैपनि प्रधानमन्त्रीलाई प्राप्त भएको हालसम्मकै बहुमत हो । ओली प्रधानमन्त्री भए लगत्तै नेपालसँग केही नरम बनेको भारत आफ्नो कुटनीति फेर्ने सोचाईका साथ ओलीलाई भारतमा राजकीय भ्रमणका साथ सम्मान गर्न पनि ०७४ सालमा नै सफल भयो । केही दिन अघि मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको राजकीय भ्रमण गरेका थिए ।
वर्ष २०७४ राजनीतिक घटनाक्रम र चुनावले तातेको वर्ष सावित भयो । गणतन्त्र कार्यान्वयनको चरण पार गर्न यो वर्ष सफल भइयो । संघीयतामा मुलुक गए पनि त्यसको अभ्यास गर्न लामो समय भएको थियो । यस वर्षले त्यो अवसर सारा नेपालीलाई जुराइदियो । वर्ष २०७४ नेपालको इतिहासमा महत्वपूर्ण सालका रुपमा दर्ज हुनसफल भयो ।
राजनीतिमा सुधार उन्मुख भएपनि नेपालमा युस बिमान दुर्घटना हुन पुग्यो । त्यस्तै २०७४ सालमा नै झापामा सबैभनदा धेरै कफ्यु पनि लाग्यो । बालक हत्याकण्डले उग्ररुप लिदाँ बिर्तामोडबासीले ७२ घण्टाबढी कफ्युको सामना गर्नुप¥र्यो । प्राकृतिक प्रकोपले पनि धेरै नेपालीको ज्यान लियो । समग्रमा हेर्ने हो भने नेपाल र नेपालीका लागी उल्लेखनीय उपलब्धी नभएपनि आंशिक उपलब्धीहरु प््राप्त हुन पुग्यो ।
वडाको बजेटले क्यारमबोर्ड खरीद
प्रयोगशाला सेवा सञ्चालन